ओलीले दिए मेचीनगर-गौरादह र बुद्धशान्तिका अन्तर्घातीलाई आफै प्रष्टिकरण दिन सात दिन - Janata Times
ओलीले दिए मेचीनगर-गौरादह र बुद्धशान्तिका अन्तर्घातीलाई आफै प्रष्टिकरण दिन सात दिन
सात दिनभित्र आफै मबाट यी–यी कमजोरी भए भनेर प्रष्टिकरण बुझाउनोस, छानविन गर्दा दोषी पाइए निर्ममतापुर्वक कार्वाही हुन्छ : ओली
आज केही आन्तरिक कुरा गरौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा झापामा एमालेले सानदार जीत हासिल गरेको छ । झापामा एमालेले दुई तिहाई जित्यो, हामीले दुई तिहाई जित्यौ, तर दुई तिहाई जित्दा पनि हामीले हार्नै नपर्ने ठाउमा हार्नुपर्यो । के मेचीनगर एमालेले मेयर हार्ने ठाउँ हो ? मेचीनगरमा एमालेले हार्न मिल्छ ? हार्न सुहाउँछ, ? एमाले उम्मेदवार हार्ने खालका कुनै योगदान नै नभएका ब्यक्ति हुन ? उहाँसँग कतै तुलना गर्न मिल्ने अरु पाटीृका उम्मेदवार थिए ?
गौरदाह जस्तो ठाउँमा एमालेले मेयर हार्ने कुरा सोच्न सकिन्छ ? तर हारियो किन हारियो भन्दा हाम्रैले हराए । बुधवारे भनेको उहिलेदेखि नै हाम्रो किल्ला हो । ४७ स्थानमा ४७ स्थान नै जित्ने ठाउँ हो, सतप्रतिशत जितेको ठाउँ हो । २०४९ र २०५४ मा हामीले सतप्रतिशत जितेको होइन ?, त्यस्तो ठाउँमा जिल्ला अध्यक्ष जस्तो प्रतिष्ठित नेता एउटा गाउँपालिकामा हार्नुभयो । त्यहा हार्ने ठाउँ हो ? बिल्कुलै होइन । यति हुनै नसक्ने काम कसरी भइरहेको छ । नेकपा एमाले भएर एमालेमा मतदान नगरेर अन्त मतदान गर्यो वा रुखमा भोट हाल्यो भने एमाले हुन्छ ? यदि त्यस्तो छ भने एमाले होइन ।
गौरदाह जस्तो ठाउँमा एमालेले मेयर हार्ने कुरा सोच्न सकिन्छ ? तर हारियो किन हारियो भन्दा हाम्रैले हराए । बुधवारे भनेको उहिलेदेखि नै हाम्रो किल्ला हो । ४७ स्थानमा ४७ स्थान नै जित्ने ठाउँ हो, सतप्रतिशत जितेको ठाउँ हो । २०४९ र २०५४ मा हामीले सतप्रतिशत जितेको होइन ?, त्यस्तो ठाउँमा जिल्ला अध्यक्ष जस्तो प्रतिष्ठित नेता एउटा गाउँपालिकामा हार्नुभयो । त्यहा हार्ने ठाउँ हो ? बिल्कुलै होइन । यति हुनै नसक्ने काम कसरी भइरहेको छ । नेकपा एमाले भएर एमालेमा मतदान नगरेर अन्त मतदान गर्यो वा रुखमा भोट हाल्यो भने एमाले हुन्छ ? यदि त्यस्तो छ भने एमाले होइन
योगदान, ब्यवहार आचारण, क्षमतामा उहाँसँग तुलना गर्ने गरी कसैले दिएको थियो उम्मेदवार ? ४८ बर्षदेखि अनवरत जनताको बचिमा काम गरेको उम्मेदवार हुनुहुन्थयो, मेयर हार्ने खालको हो र ? अनि किन हार्नुभयो उहाँले ? लामो इतिहास बोकेको, अनवरत काम गरेको उम्मेदवार, जसलाई कसैले आरोप लान्छना लगाउन सक्ने कुनै ठाउँ छैन, बलिदानको इतिहास पनि सवैको भन्दा रामो छ । एमाले जस्तो सुदृढ संगठन भएको पार्टी र इतिहास बोकेको उम्मेदवार मेचीनगरमा हार्छ । किन हार्यो ?
नचाहिने खालका कुण्ठाहरु बेकेर गुटबन्दी गर्दै हिडनेलाई छाडिन्न । पार्टी उम्मेदवार हराउनेहरु एमाले होइनन, तिनीहरुको यो पार्टीमा स्थान छैन । केही पनि नभए पनि बिरोधको नाममा बिरोध गर्दै पार्टी हराउन लाग्नेहरुलाई अव छुट हुन्न
तपाई सवैलाइ भन्छु, एमालेभित्र दुई फ्याक्ट हुनुपर्ने अव कुनै बिषय छ ? कुनै बिवाद छ नीतिमा ? केमा मतभेट छ ? कुनै मतभेद छैन । कुन निती भएन, केमा मतभेद छ । अनि आफ्ना स्वार्थ, आफ्ना कुण्ठा अथवा ब्यक्तिगत लगुताभाष वा कुण्ठाहरुलाई ल्याएर पार्टीलाई नोक्सान पार्ने, पार्टीलाई नोक्सान पारेर देशलाई नोक्नसा पार्ने एमाले कार्यकर्ता हुन्छ ? किल्कुलै हुँदैन । झापामा कुनै पक्ष छैन, हराउने एमाले कार्यकर्ता होइन, हुनै सक्दैन । झापामा यो काम गर्ने जोकोही होस, कार्वाही हुन्छ । एमालेमा कुनैपनि कार्यकर्तामाथि भेदभाव हुँदैन ।
नचाहिने खालका कुण्ठाहरु बेकेर गुटबन्दी गर्दै हिडनेलाई छाडिन्न । पार्टी उम्मेदवार हराउनेहरु एमाले होइनन, तिनीहरुको यो पार्टीमा स्थान छैन । केही पनि नभए पनि बिरोधको नाममा बिरोध गर्दै पार्टी हराउन लाग्नेहरुलाई अव छुट हुन्न । जाली झेली र षडयन्त्रकारीहरुको समाज बनाउन खोजेको होइन हामीले । हामीले ढोका र दराजमा ताल्चा साँचो लगाउन नपर्ने समाज बनाउन खोजेको हो ।
बदमासी गरेको पाइएमा निर्ममतापुर्वक कार्वाही हुन्छ । यदि कसैले गल्ती गरेको छ भने एक हप्ताको म्याद हुन्छ । यदि कसैले एक साताभित्र मबाट यी यी कमजोरी भयो भनेर लिखित प्रष्टिकरण दिन्छ भने क्षमा दिइन्छ । होइन छानविन गरेर गल्ती गरेको पाइयो भने कुनै छुट हुन्न । कसैलाई छाडिन्न । सवै भ्रम मुक्त भए हुन्छ ।
(आज भपापामा आयोजित नवनिर्वाचित जिल्लाका जनप्रतिनिधिलाई शुभकामना तथा बधाई दिन आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले दिनुभएको निर्देशनको सम्पादित अंश)
२५ असार २०७४, आईतवार १६:१३मा प्रकाशित
सरकारमा सहभागिताको अध्याय समाप्त भएको राप्रपाको घोषणा, भन्छ: संविधानको कार्यान्वयनमा गम्भिर देखिएन् सरकार
वडा नम्वर १९ को निर्वाचन प्रक्रिया शुरु गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई आयोगको निर्देशन
लायन्स क्लवको पनि भक्तपुरमा आँखा उपचार केन्द्र